Sirna filannoo walmakaa siyaasa biyyattii fooyyessuuf
Bara 2008tti jeequmsi kutaalee biyyattii gara garaatti erga uumamee booda sirna baniinsa Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataarratti Pirezidaantiin Mootummaa RFDI, Doktar Mulaatuu Tashoomaa haasaa taasisaniin, mootummaan haaromsa gadi fagoo hojiirra oolchuun sirna filannoo biyyattiin ittiin gaggeeffamaa jirtu hanga fooyyessuutti kan taasisu ta’uu waadaa seenanii turan.
Kanumarraa ka’uunis bara 2009 keessa Ministirri muummee RFDI, Obbo Hayilamaariyam Dassaalany ejjennoo mootummaasaanii wayita ibsanitti, hojiilee guguddoo mootummaan raawwatu keessaa inni jalqabaafi hangafni sirna filannoo fooyyessuu ta’uu ibsanii turan.
Haaluma kanaan paartiileen siyaasaa karaa seera qabeessaan galmaa’anii socho’aa jiran 21 ADWUI waliin sirna filannoorratti ittifufiimsaan waliigaltee taasisuuf marii eegalanis, jalqabumarratti paartiileen muraasni waliigalticha dhiisaniiru. Ta’us, paartiileen siyaasaa 15 ADWUI marii siyaasaa taasisaa jiru.
Paartiileen siyaasaa maricha addaan kutanis Paartiilee Tokkummaa Federaalawaa Dimokraatawaa Itoophiyaa (Madirek)fi Samaayaawwii haalatti ajandaan bocamuufi namootni waltajjii gaggeessan siyaasa kamirraayyuu bilisa ta’uu qabu jechuun falmaa turaniiru.
Ta’us, yaadni paartiilee kanneeniin dhiyaate kun ADWUIdhaan fudhatama waan hinarganneef maricharraa fagaataniiru.
Paartiileen lameen erga addaan kutanii booda garuu paartiileen 15 hafan eenyummaa qaamolee waltajjii gaggeessaniifi ajandaawwan mariin irratti taasifamu bocuun yeroo yerootti walfalmuurratti argamu.
Haala kanaan paartiileen kunneen waltajjii mariif kan filatan keessaa galmeessa paartiilee siyaasaa eeru labsii 573/2003 irratti walfalmuun labsicha fooyyessuuf waliigalaniiru.
Ta’us, paartiileen kunneen labsicha fooyyessuuf erga waliigalanii booda paartiileen haaldureerratti mormuun ba’an jechuun Madirakiifi Samaayaawwiin, akkasumas ogeessotni seeraa fooyya’insi labsicharratti taasifame sirrii akka hintaane ibsaa turaniiru; ammallee qeequurratti argamu.
Ka’umsi mormii paartiilee lameeniifi ogeessota seeraas bu’aa waliigaltee godhamerraa argame yoo ta’u, paartiin seera qabeessaan akka biyyaalessaatti galmaa’uu danda’u tokko miseensa kuma tokkoofi 500 irraa gara kuma sadiitti guddisuu, akkasumas akka naannootti paartiin galmaa’u ammoo miseensota 750 irra gara kuma tokkoofi 500tti guddisuun qaama labsichaa gochuun ba’uu waan danda’eefi.
Kunimmoo paartiileen waliigaltee uumuu keessaa bahaniifi kanneen haaraa akka paartii siyaasaa tokkootti hundaa’uu barbaadan dirree siyaasa biyyattii keessatti akka hinhirmaanneef daandii kan cufuudha, jechuun fudhatama dhabsiisu.
Kana malees, qaamoleen waliigalticha morman marti rakkoolee siyaasa biyyattii furuuf paartiileen siyaasaa kanaan dura hingalmoofne akkaataa itti galmaa’uu danda’an osoo hintaane, kanneen galmaa’aniyyuu haala walqixa ta’een dorgomuu kan hindandeenyeedha jechuun fooyya’insa labsicharratti taasifame qeequ.
Paartiileen siyaasaa 15fi ADWUIn garuu mormii dhiyaate kana kan hinfudhanne ta’uu beeksisu. Kunimmoo sirna filannoo sagaleen kutaalee hawaasaa kamiyyuu itti dhaga’amuu danda’u uumuu keessatti rakkoo qabaachuusaa kan mul’isu jechuudha.
Haaluma walfakkaatuun paartiileen siyaasaafi ADWUIn waliigaltee taasisaa jiran ittuma fufuun labsii 532/99 irratti kan waliigalan yoo ta’u, kanaanis sirni filannoo biyyattii walmakaa ('mixed') ta’uu akka qabu waliigaltee uumaniiru. Sirna filannoorratti waliigaluun danda’amus dhibbantaarratti garuu falmii cimaan gaggeeffamaa tureera; wayita ammaas hoggantoota paartiilee siyaasaa muraasarratti shakkii uumaa jira.
Kunis, dhibbantaan sirna filannoo walmakaa dursa ADWUItiin dhiyaate 10/90 yoo ta’u, paartiileen waliigalticharratti hirmaachaa jiran ammoo 50/50 ykn 40/60 akka ta’uuf mormaa turaniiru. Dhumarratti garuu dhibbantaan sirna filannichaa 20/80 akka ta’uuf guutummaatti waliigalameera.
Haa ta’u malee, adeemsa waliigaltee taasifamaa jirurratti hoggantootni paartiilee siyaasaa tokko tokkoofi ogeessotni seeraa mormaa kan jiran yoo ta’u, mootummaan tarkaanfii akkanaa fudhachuunsaa bara darberraa kaasee jeequmsa turerraa ka’uun ta’uu ibsanii, ka’umsi kaayyoo waliigaltichaa garuu daandii barbaadamerraa kan maqeedha jechuun qeequ. Kunis, gaaffii hawaasni bal’aan kaasaa tureefi jiru kan hindeebisne ta’uu hubachiisu.
Waliigaltee itti fufiinsaan taasifamaa jiru kanas keessumaa paartiin Madirakiifi Samaayaawwii ceepha’aa kan jiran yoo ta’u, haaromsaan booda sochii siyaasa biyyattii kan tasgabbeessu miti jechuun yeroo addaddaatti qeeqaa jiru. Kunis, sirna filannoo biyyattii keessatti rakkoo guddaan sirna filannoo bilisa, haqaqabeessaafi walabaan adeemsisuudha malee dhibbantaasaa jijjiiruu akka hintaane ibsu.
Kanarra darbee ammoo ADWUI waliin waliigalteen taasifamaa jiru sirna filannoo biyyattii jijjiiruu malee filannoon gaggeeffamuu malu bilisaafi haqaqabeessummaasaa irratti kan walii hingalamneedha jechuun komii qabanis dhiyeessu.
Kunimmoo waliigaltichi guutuu akka hintaane argisiisa jechuudha, jedhu. ADWUIfi paartiileen siyaasaa waliigaltee taasisaa jiran garuu adeemsi jiru guutuu ta’uufi sirna ijaarsa dimokraasii biyyattiin gaggeessaa jirtu bal’isuurra darbee baay’inni miseensota Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataa kan duraarratti (547) 110’n akka dabalu taasiseera, jechuun mormii paartiilee kanneenii fudhatama kan hinqabneedha, jedhu.
Walumaagalatti, sirna filannoo biyyi keenyaa ittiin gaggeeffamaa turte fooyyessuuf haaluma mootummaan waadaa galeen waliigalteen paartiilee siyaasaa gidduutti gaggeeffamaa jira.
Waliigalteen taasifamaa jiru kunis haala siyaasa biyyattiin keessa jirtu bu’uurarraa kan jijjiiruu danda’uufi dhiisuusaarratti garuu yaadoleen mormii hedduun jiraatanis, paartiin biyya bulchaa jiru, (ADWUI)n waliigaltichi sirna filannoo keessatti sagalee kutaalee hawaasa maraa kan keessummeessu ta’uu irra deddeebiin ibsuurratti argama. Kun dhugoomnaan ammoo paartiileen siyaasaa martuu haala qixa ta’een filannoorratti hirmaachuuf carraa kan argataniidha.
Torban kana/This_Week 17548
Guyyaa mara/All_Days 1442328